Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (QoorQoor ) ayaa hoyga uu uu ka degenyahay magaalada Muqdisho ku qaabilay Safiirka dowladda Qadar u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire Hasan Bin Hamza Asad Mohammed, iyagoona iska xog wareystay xaalada dalka uu hadda ku sugan yahay.
Madaxweyne QoorQoor ayaa sheegay in sidoo kale ay ka hadleen xaalada Galmudug oo hataan ay ka socdaan dib u hishiisiin ballaaran.
Waa kulankii ugu horreeyay oo labadan mas’uul ay wada yeeshaan tan iyo markii noqday madaxweynaha maamulka Galmudug.
“Waxaa hoygeyga magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay safiirka Dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya, Danjire Xamza iyo wafdi uu hoggaaminayay, waxaan iska xog wareysannay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka iyo tan maamulka Galmudug.
Axmed Cabdi Kaariye, Madaxweynaha Galmudug, ayaa Muqdisho u joogay safar shaqo, waxaana uu kulamo la qaatay madaxweynaha JF Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, masuuliyiin kale oo ka tirsan DF Soomaaliya iyo madaxda Xisbiyada Qaran oo ay hoggaamiyaan madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Tags: Danjire Hasan Bin Hamza, kulan, Qoorqoor, Safiirka Qatar ee Somaliya